Professional Gorufu Makirabhu Mafekitori, Wholesale Gorufu Makirabhu Ekisheni, Tsika Gorufu Setsiro Service | Jasde
Makore 20+ GOLF MUGadziri
OEM Servise yeGorofu Set, Gorofu Musoro uye zvimwe Gorufu Zvishandiso
Sehunyanzvi hwegorofu makirabhu fekitori ane makore makumi maviri neshanu, Jasde inopa gorofu makirabhu uye tsika yegorofu rinoiswa pamakwikwi mutengo wefekitori. Jasde ari pano kuti auye akanakisa emakirabhu egorofu, akaiswa pamwe nekushanda kuri nyore, mhando yepamusoro, hunoshamisa hunoshamisa mhando.
Kugamuchirwa kuti utarise zvigadzirwa pazasi uye uwane ruzivo nezve zvigadzirwa zveJasde gorofu kirabhu.
Yakagadzirirwa Rainbow Wood Set Gorofu mutyairi Driver Maraiya Wood uye Hybrid Vagadziri veChina
RAINBOW 2PC Premium Titanium Driver maviri zviyero zvakaderera cG yakavakwa kune yakawanda kumhanya m.o.i.i. Zvivakwa zvinobatsira kugadzira zvakanyanya kugadzikana uye kukanganwira zvakanyanya uye kukanganwirwa.Jasde yakagadzirirwa muraraungu mvura Staffes Vagadziri vechikepe, 100% mhando yehondo yehondo-nyaya
Yakagadzirirwa offcial cnc yakanyorwa putter Vagadziri kubva kuChina
Xenos Series Putter anoita chimiro chechimiro chinosvibisa. Pepa chete rakanyatsoisa mwenje wechiedza kuderedza iyo yese musoro uremu uyu dhizaini inoita kuti putter yakakura chimiro kuti uwedzere kugadzikana. Inoshanduka yega yega ndiro inotonhorera dhizaini. 4Weights pane imwe chete ndiro inokwanisa kushandurwa zvinhu kuti usangane zvakasiyana putter kurema. Tsika dzetsika dzakabatanidzwa: Ruvara rwemusoro, logo, grip, uye kureba.Jasde yakagadzirirwa offcial cnc yakanyorwa putter Vagadziri vechikepe, 100% mhando yemhando yehondo-mutoro wenyaya
Wholesale Iron # 7 Imwe Leng iron Gorufu Glf Club yakaisa single swing simbi nemutengo wakanaka-jasde gorofu
Single Swing Golf Simbi Set: 4,5,6,7 ese Irons ihurefu - 37. 25 " kunoita kuti vakunde kurova, kuwedzera kukanganwira uye kushandisa zvinowirirana nekutanga kwekutanga kweiyo pfuti imwe neimwe inogadzira inoenderana pakati pekirabhuJasde Wholesale Iron 7 single neGogoodprice-jasde, 100% mhando warrenty-mutoro wenyaya
Isu hatisi chete gorofu yakamisikidzwa fekitori yezvikwata zvepamusoro zvegorofu, tsika yegorofu seti, isu tiriwo bhizinesi rakanaka bhizinesi, muJasde mune sarudzo dzekutenga zvigadzirwa zvegorofu uye kupihwa masevhisi ausingakwanise kuwana chero kumwe kunhu.
Ndizvozvo-Isu tinopa kwete chete GOLF, asi zvakare BASA!
1. Tsika yepamusoro yekuita titanium madhiraivha
2. Mutengo wekukwikwidzana pamatanda ekugadzira uye wedges
3. Yakasimba R
& D kugona
4. Zvigadzirwa zvemberi
Tinogona kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana nevatengi. Jasde nyanzvi yebasa timu iri pano kuti ishandise zvido zvako mumakirabhu egorufu mumiti nemabhaudhi. Kugamuchirwa kuti utaure nesu kana iwe uchifarira basa reJasde.
Intro kune Hybrid Wedge-Jasde Golf Club Commassiazation Muenzaniso
Isu tinopa OEM, Service service kune vatengi kubva pasi rese kubva kuGorufu vakaiswa, vatyairi, matanda, mairini, mapinyi, emitoro, mamwe machiputi uye vamwe.Intro kune Hybrid Wedge-Jasde Gorofu Kugadziriswa Club Muenzaniso
MuJASDE, iwe une sarudzo dzekutenga zvigadzirwa uye kupihwa masevhisi ausingakwanise kuwana chero kumwe kunhu.
Xiamen Jasde Sports inyanzvi yepamakirabhu egorofu makirabhu ane anopfuura makumi maviri emakore ruzivo mumisoro yegorofu, makirabhu egorofu, gorofu package inogadzira uye inopa mhando dzese dzegoridhe accessories. Kambani yedu inowana muXiamen, Maodzanyemba eChina. Isu tinopa OEM, ODM sevhisi pamwe neyako mhando (Koala, Mazel) zvigadzirwa kune vatengi vanobva pasirese pasirese. Vanotyaira Gorofu, huni, simbi, putters, wedges, chippers zvese zvinogona kugadzirwa.